Aldous Huxley: Books | वर्तमान साहित्य
फोटो स्रोत Aldous Huxley: Picryl
Aldous Huxley को बारेमा हामीलाई लाग्छ कि त्यहाँ एउटा पुस्तक छ, ​​त्यो 'ब्रेभ न्यू वर्ल्ड', यद्यपि, सत्य यो हो कि लेखकले धेरै कामहरू लेखे। तर, यदि हामीले तपाईलाई सोध्छौं एल्डस हक्सले र उनका पुस्तकहरू, के तपाइँ हामीलाई इन्टरनेटमा नहेरी केहि थप बताउन सक्नुहुन्छ? सायद, धेरै कमले त्यो प्रश्नको जवाफ दिन सक्छन्।
यस कारणले, यस अवसरमा, हामी XNUMX औं शताब्दीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विचारक मानिने लेखकमा ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छौं। तर यो लेखक को थियो? अनि उनले कुन किताब लेखे ? हामी तपाईलाई सबै कुरा बताउँछौं।
1 जो अल्डस हक्सले थिए
2 एल्डस हक्सले: उनले लेखेका पुस्तकहरू
2.5 यात्रा साहित्य
जो अल्डस हक्सले थिए
स्रोत: सामूहिक संस्कृति
Aldous Huxley को पुस्तकहरू कुन हो भनेर जान्न अघि, यो सुविधाजनक छ कि तपाईलाई यस लेखकको इतिहासको बारेमा थोरै थाहा छ, जो अब देखि हामी तपाईलाई बताउँछौं कि यो एकदम आकर्षक छ।
Aldous Huxley, पूरा नाम Aldous Leonard Huxley, Godalming, Surrey मा 1894 मा जन्म भएको थियो। उसको परिवार "नम्र" थिएन जुन अर्थमा तिनीहरूले बेवास्ता गरे। र यो उनको हजुरबुबा थॉमस हेनरी हक्सले, एक धेरै प्रसिद्ध विकासवादी जीवविज्ञानी थिए। उनका बुबा, एक जीवविज्ञानी पनि, लियोनार्ड हक्सले थिए। उनकी आमाको लागि, उनी अक्सफोर्डमा अध्ययन गर्न अनुमति दिइएका पहिलो महिलाहरू मध्ये एक, हम्फ्रे वार्डकी बहिनी (एक सफल उपन्यासकार जो पछि उनको संरक्षक बनिन्), र एक प्रसिद्ध कवि म्याथ्यू अर्नोल्डको भान्जी थिइन्।
Aldous चार को तेस्रो सन्तान थियो। र त्यो सबै विरासत र बुद्धिमत्ता प्रत्येक बालबालिकामा प्रतिबिम्बित भएको थियो (उनको जेठो भाइ एक उच्च प्रतिष्ठित जीवविज्ञानी र वैज्ञानिक लोकप्रिय थियो)।
Aldous Huxley Eton College मा पढ्नुभयो। यद्यपि, 16 वर्षको उमेरमा उनी आँखाको रोग पन्क्टेट केराटाइटिसको आक्रमणका कारण लगभग डेढ वर्षसम्म अन्धो भएका थिए। यद्यपि, त्यो समयमा उनले ब्रेल प्रणालीमा पियानो पढ्न र बजाउन सिके। त्यो समय पछि, उनले आफ्नो दृष्टि फर्काए, तर दुवै आँखामा धेरै सीमितताहरू भएका कारण यो गम्भीर रूपमा बिग्रिएको थियो।
यसो गर्नु पर्छ डाक्टर बन्ने सपना त्यागे र अक्सफोर्डको बलियोल कलेजबाट अंग्रेजी साहित्यमा स्नातक गरे।
22 वर्षको उमेरमा, र उनको दृष्टि समस्याको बावजुद, उनले आफ्नो पहिलो पुस्तक प्रकाशित गरे, द बर्निङ व्हील, जहाँ उनले चार वर्षमा तीनवटा खण्डमा पूरा गरेका कविताहरूको संग्रह छ: जोनाह, द डिफिट अफ युथ, र लेडा।
आफ्नो जागिरको लागि, उहाँ इटनमा एक प्रोफेसर हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँलाई यो धेरै मन नपर्ने कारणले छोड्नुभयो। केही समय पछि, उनले एथेनियम पत्रिकामा सम्पादकहरूको टोलीसँगै काम गरे। उसले आफ्नो वास्तविक नाम, छद्म नाम, 'Autolycus' संग लेखेन। त्यो जागिरको एक वर्ष पछि, उनी वेस्टमिन्स्टर गजेटको लागि थिएटर समीक्षक बने।
1920 मा उहाँले आफ्नो पहिलो कथाहरू प्रकाशित गर्न थाले। पहिलो लिम्बो थियो, जबकि, वर्षौं पछि, उनले द ह्युमन र्याप, माई अंकल स्पेन्सर, दुई वा तीन ग्रेस र फोगोनाजोस प्रकाशित गर्नेछन्।
तर पहिलो वास्तविक उपन्यास क्रोमको स्क्यान्डल थियो, जसले एक लेखकको रूपमा उनको क्यारियरलाई सुदृढ बनायो।
त्यो किताब पछि, अरु धेरै आउने क्रम जारी छ, जसलाई उसले आफ्नो अर्को जुनून, यात्रासँग जोड्यो। यसले उसलाई धेरै विधा र कथानकहरूमा लेख्न मात्र होइन, तर विभिन्न संस्कृतिहरू बाँच्न पनि अनुमति दिन्छ जसले उसलाई समृद्ध बनाइरहेको थियो र त्यो आफ्नै जीवनको हिस्सा थियो।
यो 1960 मा थियो कि उनको स्वास्थ्य समस्या साँच्चै सुरु भयो। त्यही वर्ष उहाँलाई जिब्रोको क्यान्सर भएको पत्ता लाग्यो र दुई वर्षसम्म रेडियोथेरापी गरे। अन्ततः, नोभेम्बर 22, 1963 मा, Aldous Huxley LSD को दुई डोज प्रशासित मृत्यु भयो, उनीहरूले के गर्नुपर्छ भन्ने निर्देशनहरू नछोडिकन: एकातिर, उनको कानमा तिब्बती बुक अफ द डेड पढ्नुहोस्; अर्कोतिर, दाहसंस्कार गरिँदै।
एल्डस हक्सले: उनले लेखेका पुस्तकहरू
Aldous Huxley धेरै प्रशंसनीय लेखक थिए, र यो छ उनले धेरै उपन्यास, निबन्ध, कविता, कथा... यहाँ हामी तपाईलाई सूची छोड्छौं जुन हामीले उहाँका सबै कामहरू फेला पारेका छौं (विकिपिडियालाई धन्यवाद)।
हामी यसबाट सुरू गर्दछौं कविता किनकी यो एल्डस हक्सले पुस्तकहरूमा प्रकाशित पहिलो कुरा हो। यद्यपि पहिलो सबैभन्दा पुरानो हो, त्यसपछि त्यहाँ अर्को समय थियो जब उनले फेरि लेखे।
युवा र अन्य कविताहरूको हार
एल्डस हक्सले द्वारा पूर्ण कविता
उनले विधाका हिसाबले प्रकाशित गरेका अर्को कुरा कथाहरू थिए। पहिलो ती हुन् जुन उनले युवा वयस्कको रूपमा गरे, तर पछि उनी केही थप लेख्न फर्किए।
मेरो काका स्पेन्सर
दुई वा तीन धन्यवाद
उपन्यासहरूको साथमा, एल्डस हक्सले पहिलो पटक प्रस्तुत गरेबाट धेरै सफल थिए। तर अझ बढि ब्रेभ न्यू वर्ल्डको साथ, जुन उनी प्राय: जसको लागि चिनिन्छन्। तर त्यहाँ धेरै थिए। यहाँ तपाईंसँग पूर्ण सूची छ।
कला, प्रेम र अरू सबै
पुरानो हंस मर्छ
बाँदर र सार
जिनी र देवी
माथिका सबै बाहेक, निबन्ध मार्फत जीवन र समस्याहरूमा आफ्नो दृष्टिकोण दिन धेरै दिइएको थियो। निस्सन्देह, तिनीहरू घना छन् र तपाईंले यसलाई बुझ्नको लागि आफ्नो समय लिनुपर्छ, तर उहाँको दर्शन त्यतिबेलाको उत्कृष्ट थियो र आज उहाँ बीसौं शताब्दीका आवश्यक लेखकहरू मध्ये एक मानिन्छ।
तपाईं यसलाई कसरी समाधान गर्नुहुन्छ? रचनात्मक शान्तिको समस्या
अन्त्य र साधन
विज्ञान, स्वतन्त्रता र शान्ति
विषयवस्तु र विविधताहरू
एडोनिस र वर्णमाला
स्वर्ग र नर्क
खुशी संसारको नयाँ भ्रमण
साहित्य र विज्ञान
मोक्ष। साइकेडेलिया र दूरदर्शी अनुभवहरू 1931-1963 मा लेखन
हक्सले र भगवान
अन्तमा, र लेखनसँग आफ्नो घुमफिरको मोह जोड्दै, उनले केही यात्रा पुस्तकहरू बनाउने समय पनि पाए। यसमा उनले आफूले भ्रमण गरेको सहर वा ठाउँहरू कस्तो थियो भन्ने मात्र होइन, प्रत्येक ठाउँमा आफूले के महसुस गरे भन्ने पनि खुलासा गरे। यी मध्ये उनले धेरै लेखेनन्, यद्यपि अघिल्लाहरूमा उनले आफ्नो यात्राको अंशको साथ प्लटहरू पोषण गरेका थिए।
बाटोमा: पर्यटकबाट नोटहरू र निबन्धहरू
मेक्सिकोको खाडी परे
जेस्टिङ पिलेट: एक बौद्धिक छुट्टी
के तपाईंले Aldous Huxley को केहि पढ्नुभयो? उहाँबाट कुन पुस्तक सिफारिस गर्नुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » किताबहरु » Aldous Huxley: पुस्तकहरू
रामोन डे ला क्रुज। प्रबुद्धता र संतहरू